XOG:Xasan Sheekh oo ka horyimid inay wada midoobaan xisbiga C/raxmaan C/shakur – Puntlandtimes
XOG:Xasan Sheekh oo ka horyimid inay wada midoobaan xisbiga C/raxmaan C/shakur
MUQDISHO(P-TIMES)- Xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hor yimid qorshe ay wadeen xubno ka tirsan xisbigiisa oo doonayey inay la midoobaan xisbiga uu hoggaamiyo C/raxmaan C/shakuur ee lagu magacaabo Wadajir.
Arrintan ayaa si weyn looga hadal hayaa magaalada Muqdisho, waxaana dad badan ay is weydiinayaan sababta Xasan Sheekh uu u diiday inuu la midoobo C/raxmaan C/Shakuur maadaama ay yihiin mucaaradka ugu saamaynta badan ee xukuumadda Farmaajo sida weyn uga soo hor jeeda.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si hoose saamayn ugu lahaa siyaasadda Soomaaliya, isagoo xulufaysi iyo abaabul xoogan kawaday dalka Soomaaliya gudihiisa maadaama ay gaba gabo marayso diwaan galinta xisbiyadda u tartamaya doorashada soo socota oo lagu wado in lagu dhawaaqo sanadka cusub ee soo socda.
Sarkaal u dhow madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa sheegay in uu kasoo horjeedo khilaaf ka dhex dhaca xisbiga Xasan Sheekh, isagoona hore u diiday siyasiyiin caan ah inay xisbigiisa kusoo biiraan maadaama marka doorashada soo dhowaato is qab qabsi iyo dood ay ka imaanayso cida xisbiga u tartamaysa lagana yaabo in xisbiyo kale ay ka faa’iidaystaan khilaafkaasi.
Weli ma cada qorshaha Xasan Sheekh hasa ahaatee xaalku waxa uu u muuqdaa hada mid loolan adag sababi kara, taas oo guul u noqon karta Farmaajo iyo Khayre oo hada cadaadis xoogan kala kulma labada xisbi ee Xasan Sheekh iyo C/raxmaan C/shakuur.
hadan kahadlo Xisbiyada siyasaded ee somaliya sida kuwa hader laga hadlayey oo kala ah Xassan sheikh maxamuud & Abdishakur warsame mid kodna wax xila oo danbe ma helayan & sheikh sharif sheikh axmed,dhamantod wa fashilmen,waxa kale oo fashilan,madaxweynaha hader xilka haya maxamed Abdullahi Farmajo & Ra’iisalwasarihisa Xassan cali khayre,dhamantod waxay noqden dad labartay oo aan uqalmin hogaminta ummadda somaliyed,dhanka puntland C.C C sharmarke Dr,Gaas waxay ku jiran dadka fashilmay,wadankan Dadka layaqan oo wax hogamin kara waxa ugu dhow Dr.Cali maxamed Geedi oo somaray Ra’iisal wasare hore dadka latijabiyey qof aragti hogamiye leh ninkas aya ugu dhoow dadka layaqan,waxa dhici karta in aay jiraan dad badan oo wax hogaminkara hase ahate kuwas hader dadka laga yaqan.